Macallin Frank Lampard oo u hanjabay Manchester City iyo Liverpool… (Muxuu sameyn doonaa?) – Gool FM
Macallin Frank Lampard oo u hanjabay Manchester City iyo Liverpool… (Muxuu sameyn doonaa?)
(London) 21 Juun 2020. Tababaraha kooxda Chelsea ee Frank Lampard ayaa sheegay inay lacag kale qarash gareyn doonaan haddii ay u arkaan lama huraan, isagoo saxiixyadii Timo Werner iyo Hakim Ziyech ku tilmaamay inay marqaati u yihiin shaqada wacan ay qabanayaan isaga iyo maamulka kooxdiisa.
Blues ayaa ganaax laga saaray suuqa xagaagii hore, tii oo ay jirto inay ku guuldarreysatay inay sameyso saxiixyo cusub bishii Jannaayo ee horraantii sanadkan, inkastoo ganaaxii ay kala kulantay FIFA laga dulqaaday.
Balse agaasimaha guud ee kooxdaas, haweeneyda lagu magacaabo Marina Granovskaia iyo la taliyaheeda farsamada ee Petr Cech oo la shaqeynaya Macallin Lampard ayaa ku guuleystay inay dhammeystiraan saxiixyada Werner oo ay RB Leipzig kaga soo qaateen 48 milyan oo gini iyo Ziyech oo ay Ajax kaga soo qaateen 36 milyan oo gini.
Iyadoo la rajeynayo in muddada uu furnaanayo suuqa kala iibsiga xagaaga la gaarsiiyo illaa bisha Oktoobar, Chelsea ayaa la filayaa inay mar kale suuqa ku laabaneyso, waxaana bartilmaameed u ah difaaca bidix ee Ben Chilwell oo ay kooxda Leicester City ku qiimeyso 80 milyan oo gini, si la mid ah Kai Havertz oo isna kooxdiisa Bayer Leverkusen dul dhigtay qiimo dhan 90 milyan oo gini.
Kooxda reer England ayaa sidoo kale dooneysa inay la soo saxiixato difaac dhexe iyo goolhaye haddii ay fasaxayaan Kepa Arrizabalaga.
“Tani waa kooxda kubadda cagta Chelsea, waxaana dooneysa inaan soo xirno farqiga inoo dhexeeya kooxaha ugu awoodda badan. Sidoo kale saxiixyadii Timo iyo Ziyech waxay noo ahaayeen akhbaar wanaagsan, waxaana dooneynaa inaan xoojinno boosas kale. Waa inay jiraan ciyaartoy suuqa yaalla oo aan dareemeyno inaan heli karno” ayuu yiri tababaraha kooxda Chelsea.
Waxa uu sidoo kale intaas raaciyay: “Waan ognahay in wax badan ay noo jirto halka ugu sarreysa marka aad fiiriso bandhigga ay Manchester City iyo Liverpool sameeyeen labadii sano ee ugu dambeysay. Waxaan u baahannahay inaan isku dayno inuu shaqeeyo ujeedkeenna ah inaan soo yareyno farqigaas, balse waa inaan ciyaartoydeenna cusub aynu siinnaa waqti ay kula qabsadaan horyaalka.”
Chelsea ayaa ku jirta dardar xooggan oo dhanka suuqa kala iibsiga ah, waxaana Lampard uu doonayaa inuu xilli ciyaareedka dambe tartan u galo tartammada kala duwan ee ay kooxdiisa ciyaareyso.
FADEEXAD: Gabar jirkeeda ka ganacsata oo canug u dhashay xiddig ka ciyaara Premier League